सुदूरपश्चिममा 'चैतलो'को चटारो, छोरीचेलीका घरमा कोसेली पुर्याउन माइती पक्ष व्यस्त| Nepal Pati
सुदूरपश्चिममा ‘चैतलो’को चटारो, छोरीचेलीका घरमा कोसेली पुर्याउन माइती पक्ष व्यस्त
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम नेपाल र भारतको उत्तराखण्डमा प्रचलित परम्परा ‘चैतलो’को चटारो चलिरहेको छ । बिहे भइसकेका छोरीचेलीका घरममा कोसेली पुर्याउन माइती पक्ष व्यस्त छन् ।
अन्नपात भएकाहरुले सेलरोटी, नभएकाहरु बिस्कुट/चाउचाउ पोको पार्दै चैत महिनाभरिमा कुनै एक समय मिलाएर पुरुषहरू आफ्ना दिदीबहिनी तथा छोरीचेलीको घरमा पुग्ने गर्छन् । कोसेलीमा सेल र अन्य परिकार तथा केही दक्षिणा पनि हुने गर्छ।
स्थानीय बोलीचालीको भाषामा ‘भेटोँला’ वा ‘चैतलो’ भनिने पर्व आएसँगै नेपालको सुदूरपश्चिम तथा भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशका प्राय: घरमा यस पर्वको चटारो देखिएको हो। उत्तराखण्डको कुमाउँमा भने यसलाई ‘भिटोली’ वा ‘छापरी’ भनिन्छ।
कुमाउँ मूल घर भई हाल नयाँ दिल्लीमा प्राध्यापन गर्ने डा. सुरेश पन्त यो परम्परा नेपाल र कुमाउँको साझा एवम् प्राचीन चलन भएको बताउँछन्।
पहिलेपहिले चैत्र महिनामा गरिबीका कारण अनिकाल लाग्ने तथा घरमा भएका अन्न सकिने गर्थ्यो। त्यस्तो बेला दिदीबहिनीहरू भोकै पो छन् कि भनेर एक पटक भए पनि भेट्नु पर्छ भन्ने मान्यता शुरु भएको स्थानीय बूढापाकाहरू बताउँछन्।
प्राचीन कालदेखि नै खेतीपाती र घरगृहस्थीमा अघिपछि व्यस्त भए पनि वर्षको अन्तिम महिनामा बिहे भएका छोरीचेलीलाई माइती पक्षले माया र ममता प्रदर्शन गर्न एक चोटि भेट्ने परम्परा बसेको अनुमान शैल्यशिखर नगरपालिकाका अर्का वृद्द बताउँछन् ।
अहिले कसरी मनाइन्छ ?
विगतमा छोरीचेलीको घर जाँदा घरमै बनाएका कोसेली लगिन्थ्यो। अहिले विभिन्न मिष्ठान्न, फलफूल, चिउरा, बिस्कुट, लुगा आदि पनि लान थालिएको छ।
वसन्त ऋतुको आगमनसँगै कोइली कराउन थालेपछि छोरीचेलीलाई माइती पक्षको धेरै सम्झना आउने मान्यता यस क्षेत्रमा छ। आफ्ना दाजुभाइ नभएका महिलालाई माइती पक्षका अरू पुरुष भेट्न जान्छन्।
चैतेलोमा माइतीबाट आफूलाई भेट्न कोही नआए दु:ख लाग्ने स्थानीय विवाहित महिलाहरु बताउँछन् ।
कुनै कारणवश अथवा घरमा जुठो परेको छ भने चैत्रको साटो वैशाखमा पनि दिदीबहिनीलाई भेट्न जाने प्रचलन पनि रही आएको छ ।
(बीबीसीको सम्पादित अंश )